Ny zavatra tadiavin'ny vehivavy amin'ny lehilahy: zavatra manan-danja 3 izay mahatonga fitaovana ho an'ny lehilahy - Fifandraisana
Ny zavatra tadiavin'ny vehivavy amin'ny lehilahy: zavatra manan-danja 3 izay mahatonga fitaovana ho an'ny lehilahy
Liana amin'ny fanatanterahana azy io mandritra ny fotoana maharitra?
Te hahafantatra izay tena tian'ny sakaizanao (sy ny ho avy ho vadinao!) Hiala ny fiarahanareo?
Lahatsoratra maro no nosoratana tamin'ity lohahevitra ity na nauseam doka, saingy vitsy no manome torohevitra tena mahasoa na andrasana amin'ny zava-misy.
zavatra mahafatifaty hatao amin'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ny sipanao
Fa kosa, ny ankamaroany dia mifantoka amin'ny hetsika ivelany fa tsy taratry ny fihetsika anatiny izay ifotoran'ny fifandraisana salama.
Tsy mila lisitry ny fanasan-damba amin'ny to-dos ianao fa misy zavatra telo azonao atomboka dieny izao raha toa ka matotra ianao amin'ny fitondrana ny fifandraisanao amin'ny ambaratonga manaraka.
Ataovy fototra ny fahamendrehana
Ny fahamarinana dia voatanisa hatrany ho iray amin'ireo toetra tsara indrindra saika ny mombamomba ny mampiaraka rehetra izay voasoratra - izay milaza zavatra.
Ny ankamaroantsika dia nandainga tamin'ny fiarahana amin'ny fotoana sasany, na efa nanao ny lainga ny tenantsika, na dia teo aza ny gaffe taloha dia mitaky izany toetra izany avy amin'ireo mpiara-miasa amintsika isika.
Ho an'ny maro dia mpandika fifanarahana tanteraka amin'ny fifandraisana izany.
Aza adino ny mandeha lavitra eny amoron-dranomasina amin'ny filentehan'ny masoandro. Adinoy miteny hoe 'tiako ianao' isan'andro, na mividy ny raozy. Tsy misy ifandraisany amin'ny iota iray ireo raha tsy manana fifandraisana marina ianao.
Ny tena tadiavin'ny vehivavy dia ny fanaovana ny marina.
Zava-dehibe iray tokony hotadidina fa ny marina dia tsy vitan'ny hoe fangalana - na dia tsy misy vehivavy aza te hiasa saina hoe iza no mandefa hafatra amin'ny sakaizany, na mila mahazo toky tsy tapaka.
Tsy ny milaza aminy izay heverinao fa tiany ho re ihany koa.
Ny tena fahamarinana amin'ny fifandraisana dia ny fahaizanao mizara resadresaka sarotra sy fitsikerana matetika ataon'ny olon-tiana aza te handre.
Ny olona sasany mety mifanohitra, eny, serasera fotsiny izany. Raha mifototra amin'ny fahamarinana sy ny tsy fivadihana ny fifandraisanareo. fifandraisana tsara hanaraka.
Tsy ny maha 'mpamatsy vola' amin'ny fifandraisan'ny vadinao amin'ny ho avy no tsy zazavavy amin'ny fahantrana mila famonjena. Ireo dia hevitra lany daty sisa tavela tamin'ny lasa.
Izany dia momba ny fahaleovan-tena ara-bola sy ara-pientanam-po.
Raha manana fiara mahafinaritra ianao ary mipetraka amin'ny condo afovoan-tanàna eny amin'ny rihana faha-20, fa ny reninao kosa mbola manasa lamba sy mandoa ny fiantoham-piaranao, ianao irery mitendry ny ampahan'ny sakaiza tsy miankina.
inona no tokony hataoko raha mankaleo aho
Manome ny fisehoan'ny fahaleovan-tena vs. Ny hoe ny mahaleo tena dia zavatra roa samy hafa. Ny fananana gadget sy akanjo lafo vidy dia tsy hahatonga olona mahaleo tena raha tototry ny trosa ary tsy afaka miasa rehefa olon-dehibe.
Mianara mahandro, manasa ny akanjonao manokana, mandoa ny trosanao, miaina mifanaraka amin'izay anananao, ary manaova soja kely mandritra ny orana - izany no tena dikan'ny 'olon-dehibe'.
Ny vehivavy dia hankasitraka ny mpiara-miasa marin-toerana noho ny lehilahy manasa azy amin'ny fanomezana izay tena tsy zakany fotsiny mba hisehosehoana.
Zava-dehibe ihany koa ny fahaleovan-tena.
Manjaka amin'ny fianakavianao sy ny namanao mifampikasoka. Ny fifandraisanareo dia eo amin'ny olona roa fa tsy telo na mihoatra.
Azo antoka, miresaka amin'ny namana akaiky anao mba hahazoana torohevitra momba ny olana indray mandeha, fa aza alefa amin'ny rehetra ao amin'ny media sosialy ny fanasan-damba maloto anao, ary aza ampidirina mivantana amin'ny raharahanao.
Amin'izao vanim-potoana iainana izao dia mahazatra loatra ny mahita ny raharaha manokana ateraky ny Facebook sy Twitter. Tsy sekoly ambaratonga faharoa ity ho olon-dehibe, ataovy tsy miankina ireo zavatra tsy miankina.
Farany, aza manantena ny sakaizanao hanao zavatra amin'ny fomba mitovy amin'ny an'ny reninao. Mitombo ary tapaho ny tadin'ny aprona.
Tsy misy vehivavy te hifaninana, ampahatsiahivina tsy tapaka ny lesoka, na hokianin'ny ray aman-dreny sy ny sakaizan'ny vadiny.
Mametraha fetra ary aza avela hanelingelina ny olona, ​​na hiampita tsipika. Ilaina ny fetra amin'ny fifandraisana salama (sy sambatra!), Ary mariky ny fahaleovan-tena ara-pihetseham-po sy fahamatorana.
Hajao ny fomba fanaovan'ny vadinao zavatra ary alao antoka fa manohana azy ianao rehefa mametraka fetrany koa, raha tsy izany dia hahatsiaro ho voafitaka izy.
Raha ao anatin'izany mandritra ny fotoana maharitra ianao dia ekipa iray - arovy io fiaraha-miasa io ary asehoy ny fiombonambe. Raha tsy afaka mametraka sy mitazona fetra ianao dia ho sahirana ny fifandraisanareo.
Zavatra 10 Ny vehivavy rehetra te-hahatsapa amin'ny fifandraisana
Ahoana ny fomba hilazana raha misy ankizivavy tia anao: famantarana mazava 12 ho anao
Fomba 4 tsy fahampiana fiaraha-miory dia hanimba ny fifandraisanareo
Mizarà amin'ny The Emotional Labor
Ity dia bokotra mafana iray vao haingana izay nahazo fizarana fiheverana an-tserasera.
Raha toa ka miafina ao ambanin'ny vatolampy ianao, ny asa ara-pihetseham-po dia ny asa (tsy misaotra) ataon'ny vehivavy isan'andro hitantanana ara-batana sy ara-pihetseham-po ny andrasan'ny olon-tiany amin'ny fifandraisana.
Marina izany, vehivavy, fa tsy lehilahy, ka izany no antony fahatelo mampiditra ity lisitra ity.
Ka inona no dikan'ny hoe mandray anjara amin'ny asa mampihetsi-po?
Midika izany tsy voatery angatahina hanampy ny sakaizanao hanao drafitra, hanampy manodidina ny trano, na hitantana ny vola.
Midika izany ny sakaizanao tsy manahy momba ny fitantanana ny hatezeranao, na fipoahana ara-pientanam-po , rehefa misy resaka sarotra, na mangataka fanampiana.
Midika izany tsy mila mampitony ny ego-nao rehefa misy fanakianana mahasoa.
Momba izany tsy manantena fisaorana sy tehaka ho an'ny asa antenaina sy vitan'ny vehivavy isan'andro tsy misy fisaorana.
Nividy fivarotana vitsivitsy? Tsara, izany no antsoina hoe fizarana ny enta-mavesatra. Mety nanao an'io in-100 io ny sakaizanao nefa tsy hitanao satria antenaina araka ny fomban-drazana aminy.
Nanasa lamba ve? Tsara. Asa tokony hatao ianao nefa tsy manontany.
Namandrika ny trano fandraisam-bahiny amin'ny fialan-tsasatrao manaraka? Tsara, nahoana ianao no tsy tokony? Ianareo roa miaraka no miaraka aminy dia ny vadinao fa tsy mpivarotra dia.
ahoana ny fahafantarana fa tapitra ny fiarahanareo
Ny antony mahatonga ny fameperana sy ny fandrindrana matetika dia heverina ho asan'ny vehivavy ao anaty fifandraisana dia ny fialantsiny: ' Ny vehivavy dia tsara kokoa noho izany. '
Fako be izany.
Miorina amin'ny ara-tsosialy isika hino fa tsara kokoa amin'ny asa ara-pientanam-po ny vehivavy, ary tsy mahay ny lehilahy raha ny amin'ny> fanehoany ny fihetsem-pony.
Izany dia vokatry ny fananganana lehilahy mba hahazo valisoa amin'ny fanaovana asa izay tsy mifanaraka amin'ny anjara toeran'ny lahy sy ny vavy. Tsy maintsy miova izany.
Ny fanamafisana ireo andraikitra maha-lahy na maha-vavy ireo dia manelingelina ny lehilahy sy ny vehivavy. Ho an'ny iray, mandà ny fahazoan-dàlana ho an'ny lehilahy izy io amin'ny alàlan'ny fahafaham-baraka azy ireo.
Faharoa, manafaka ny lehilahy amin'ny fanaovana ny anjarany ara-pihetseham-po amin'ny fifandraisana izy io. Izy io dia mametraka ny fifandraisana amin'ny fomba mpamaha olana sy mpitsabo aretin-tsaina.
Tsy ny famahana olana fotsiny - fa ny fanaovana ny tena asa aoriana ny valiny farany.
Ny vehivavy dia tsy maniry anao hamaha hatrany ny olana tian'izy ireo hatsahanao Ny hoe ampahany amin'ny olana voalohany.
Mihoatra lavitra ny fakana ny ba kiraronao sy manao ny sakafo hariva tsindraindray - momba ny fandaminana sy ny fandaminana asa izay matetika no mitaky asa ara-tsaina sy ara-pihetseham-po indrindra.
Mikasika ny fihainoana izany, ary tsy hitsoka rehefa mandre zavatra tsy tianao.
Ny fanaovana zavatra mialoha no tsy anontaniana. Jereo izay ataon'ny vadinao ho anao ary manaova toy izany koa ho valiny.
Tsy momba ny habetsaky ny zavatra ataonao, ny tantaram-pitiavana voninkazo ary ny tselatra, satria izany rehetra izany dia milomano fotsiny amin'ny mofomamy.
Raha tena maniry fiainana lava sy fifandraisana sambatra ianao dia manambola amin'ny fanovana fitondran-tena fa tsy mividy zavatra.
Mora ny zava-drehetra - ny tena asa dia ny manova ny fitondrantenanao ho mpiara-miasa tsara indrindra azonao amin'ny fisehoana ho mitovy aminy isan'andro.
Raha mahitsy ianao, mahaleo tena ara-pientanam-po ary ara-bola, ary mandray anjara amin'ny asa ara-pientanam-po, dia hanana ireo singa telo lehibe hahatonga anao ho vady tsara ho an'ny mpiara-miombon'antoka rehetra.
nahoana ny vady mandao ny vady tiany
milalao mafy hahazoana fifandraisana
tsara ilay seho lehibe
ahoana ny fatokisana ny sakaizanao indray
fomba lehibe hanovana an'izao tontolo izao
ahoana no tsy ho fantatrao daholo
te hivoaka aho nefa tsy manana namana